Momba anay - Shanghai Tops Group Co., Ltd.
Shanghai Tops Group Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2000, dia mpamatsy kalitao avo lenta amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fivarotana ary serivisy famenoana vovoka & granule ary famonosana, ary koa ny tetik'asa turnkey mifandraika amin'izany.
tsara indrindra any
Manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny famolavolana, ny famokarana, ny fivarotana ary ny servisy andiana milina feno ho an'ny karazana vovo-dronono sy vokatra granular toy ny milina fampifangaroana kofehy roa, milina fampifangaroana alika tokana na avo roa heny, milina famenoana lohany, mpandanja maro loha, milina famenoana ranon-javatra, milina fametahana, masinina fanaovana marika ary sns. Ny tanjonay voalohany amin'ny fiasana dia ny manolotra ireo vokatra mifandraika amin'ny indostrian'ny sakafo, indostrian'ny fambolena, indostrian'ny simika, ary ny sehatry ny farmasia sy maro hafa.
Any Shanghai, Sina izahay no misy fidirana fitaterana mety. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Ho fanampin'izay, nahazo mari-pankasitrahana CE & JMP izahay. Tsy ny fivarotana tsara fotsiny amin'ny tanàna sy faritany rehetra manodidina an'i Shina, fa ny vokatray koa dia aondrana any amin'ny mpanjifa any amin'ny firenena sy faritra toa an'i Eropa, Amerika Avaratra sy atsimo, Aostralia Azia ary koa Afrika. Raisinay koa ny kaomandy OEM sy ODM. Na ny fisafidianana vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaoginay na ny fikatsahana fanampiana momba ny injeniera ho an'ny fangatahanao dia azonao atao ny miresaka amin'ny ivon-toeran'ny mpanjifantsika momba ny fepetra takianay. Na inona na inona mpampiasa anao sy mpivarotra ambongadiny, ny masininay dia azo ampifanarahana arakaraka ny zavatra takinao amin'ny famolavolana na fanamboarana asa. Satria mpanamboatra izahay, tsy ny fiovana manokana amin'ny fiasa ihany fa ny famolavolana ny fomba fijery na dia ny kojakoja fanampiny aza, manana ny fahafaham-po ianao.
Azonao atao ny mahazo fiainana lava aorian'ny serivisy avy aminay: ny masininay rehetra dia manana antoka 2 taona, ary ny motera dia manana antoka 3 taona. Azonao atao ny mahazo ny vidin'ny kojakoja tsara indrindra avy aminay.
Manome lanja ny mpanjifanay izahay ary manolo-tena hihazona ny fifandraisana mba hiantohana ny fahafaham-po mitohy ary hamorona fifandraisana mandresy. Andao hiasa mafy isika rehetra ary hanao fahombiazana bebe kokoa amin'ny ho avy!